May Nyane: June 2007
ပြည်တွင်းက အကိုတယောက်နဲ့ စကားပြောရာကနေ
စိတ်တွေ လေးလံထိုင်းမှိုင်း သွားခဲ့ရတာကြောင့်ပါပဲ။
အပေါ်က လှမ်းဆွဲတာက အားပျော့တယ်.. မထိရောက်ဘူး…
အဲဒီ ချောက်ထဲကလူတွေနဲ့ တသားတည်း ရှိပြီး
ထိထိရောက်ရောက် တွန်းပို့ပေးနိုင်မှာ.. တဲ့။
အတွင်းအပြင် အယူအဆမတူတဲ့ ကိစ္စတွေပေါ့။
တချို့ သူ မှန်.. တချို့ ကျမ မှန် ။
ပြဌာန်းစာကောင်းကောင်း ရေးမယ့်သူတွေ မရှိတာတဲ့။
လူတော်တွေ မရှိတော့တာ… တဲ့။
အဲ..လူတော်တွေ ဘာမှ ပြဌာန်းခွင့် ရေးခွင့် မရတာကို ရော..
ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ… ဆိုတော့..
ရအောင် လုပ်ရမှာပေါ့.. ပို ကြိုးစားရမှာပေါ့ တဲ့။
ကျမ အများကြီး ကြိုးစားခဲ့ဖူးတာတွေ …
ဘယ်လိုမှ မရနိုင်လို့ ခြေကုန်လက်ပန်း ကျခဲ့ရတာတွေ..
ပြီးတော့ စိတ်လျှော့ လွယ်ခဲ့လေသလား..။
ကျမ တယောက်တည်း ငူငူကြီး ထိုင်နေမိပါတယ်။
ပြီးတော့ ကဗျာတွေ အများကြီး ထိုင်ဖတ်…။
ကျမကို စိတ်သက်သာရာ ရသွားစေခဲ့ပါတယ်။
စိုထိုင်းဆ ခပ်များများနဲ့ ကောင်ပါ…။
(၁၉၉၅ ဇူလိုင်လ-စက်မှုတက္ကသိုလ်ထဲမှာ ထုတ်ခဲ့တဲ့
ညလယ်မိုးရဲ့ မေးခွန်းတွေ ဖြေအပြီး..
ကျမ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ အိပ်ယာဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အရှေ့ဆီမှာ ရောင်နီလည်း လင်းလုလာပြီ..
အင်းးး အချိန်ကလည်း မနက် ၃နာရီခွဲလေ..။
ကိုစေးထူးရဲ့ မွေးကျေးဇူး ပို့စ်ကို ဖတ်အပြီးမှာ
မောင်နန္ဒရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ ။
ငါ့ဘ၀ငါ… နောက်ပြန်စီးမိပေါ့ ။ ။
စီးဆင်းလာတဲ့ ကောင်ပါ … ။
မလွမ်းချင်ပါဘူး … ငှက်ကလေးရဲ့
အမေက..ရိုးတယ် ၊ လှတယ်
နောက်ပြီး .. အ တယ်..
မိုးကိုတော့ အမြဲ သူ မျှော်
ရုပ်ဆိုး ကောက်ကွေ့နေ ထင်ရဲ့…
ငါ ခြေထောက်ငါ ငုံ့ ကြည့်မိတယ်
ဒါကိုပဲ မကြာခဏ ထွေးထုတ်နေမိတော့
ငါ့ဓါတ်ပုံ မှိန်ဖျဖျလည်း ကျန်ခဲ့ပြီ..။
ငါလည်း.. ငါ့လောဘငါ ကျောပိုးရင်းပေါ့…။
ငါလည်း တစ်ယာပြီး တစ်ယာ...
ငါလည်း တစ်လိပ်ပြီး တစ်လိပ်...
ကွမ်းသွေးကွက် နဲ့ ဆေးလိပ်တို
ငါထွေးလိုက်တဲ့ ကွမ်းသွေးဟာ.. ငါ
ငါပစ်လိုက်တဲ့ ဆေးလိပ်တိုဟာ.. ငါ
အမေ မျှော်တဲ့ မိုးလို…
မိုးကို မျှော်နေတဲ့ ငါ့လို
ငါ့ကို မျှော်နေမယ့် အမေဆီ
ငါတို့ မျှော်တဲ့ မိုးပါ..။
မိုး နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကျောင်းဆီရောက်တော့ အင်းလျားကိုပါ ဖြတ်မိခဲ့သေး။
ဒါနဲ့ .. ကျမသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အင်းလျား ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုပါ သတိရသွားတယ်။
၁၉၉၅ဇူလိုင်မှာ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်က ကဗျာသမားတွေ အပျော်စုထုတ်တဲ့
အမေမျှော်တဲ့မိုး.. ကဗျာစာအုပ်ထဲမှာ ပါခဲ့တာပါ။
ခု... အဲဒီကဗျာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရင်ထဲ စီးဆင်းသွား.....။ ။
ထုံးစံအတိုင်း ကဗျာရှင်ကို ခွင့်မတောင်းနိုင်ပါ။
မေ (မေဓါဝီ) နဲ့ ဆဂိ (ယူဆဂိ) တို့က ကျမကို
မိုးအကြောင်းရေးဖို့ Tag ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရေးစရာလေးတွေ တိုက်နေတာကြောင့်ရော..
သူများတွေ ရေးတာ စောင့်ဖတ်ချင်တာကြောင့်ရော..
လူကြီးပီပီ .. ခုမှပဲ နောက်ကလိုက် Tag လိုက်ပါပြီ။
တကယ်တော့ မိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇွန်လကို ကြိုရင်း ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဘာလို့ဆို.. ကျမက မိုးချစ်တဲ့သူလေ။
တခါတလေမှာ အကြောင်းပြချက် မည်မည်ရရမရှိဘဲ
တောင်တွေ တောတွေ ကြည့်ရင်း တချို့က လွမ်း..
မြက်ခင်းပြင်တွေ ကွင်းပြင်တွေ ကြည့်ရင်း လွမ်း..
ကန္တာရ တွေ သဲသောင်တွေ ပင်လယ်တွေ ကြည့်ရင်း လွမ်း..
ပန်းတွေကို ချစ်။ ရာသီဥတုကို ချစ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ ချစ်။ ချစ်သူကို ချစ်။
အဲဒီလို ခံစားချက်တွေက… ဆန်းတယ်။
ဒီအထဲ ကျမလဲ ပါတယ်။
ပန်းပွင့်တွေကို ခံစားတယ်။ ရေမြေတောတောင်ကို ခံစားတယ်။
နှင်းတွေကို ခံစားတယ်။ မိုးရေစက်တွေကို ခံစားတယ်။
နွေရွက်ကြွေတွေကို ခံစားတယ်။ ခါသင်္ကြန်ကို ခံစားတယ်။
အမည်နာမတွေကို ခံစားတယ်။ စိတ်တွေကို ခံစားတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ မိုး ကို ခံစားတာလည်း ပါပါတယ်။
ပြီးတော့ မိုးရဲ့ရနံ့ ..မိုးရဲ့ လေပြေ..
မိုး ဆိုတဲ့ အမည်နာမ.. အားလုံးကို ချစ်တာ။
မိုးရွာတဲ့ မြင်ကွင်း မပါတာ ခပ်ရှားရှား)
မိုးတွေ သည်းသည်းရွာပြီဆို.. ခုချိန်ထိ ကျမ ငြိမ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကောင်းတုန်း။
ဒါပေမဲ့ မိုးကို ခံစားတတ်လာတာကတော့ အရွယ်ရောက်မှပါ။
ကျောင်းသူဘ၀.. မိုးရွာပြီဆို.. အင်းလျားကန်ဘောင်ဆီ အပြေးသွားပြီး
မိုးရေတွေ ရေပြင်ပေါ် မြားတံလို ကျနေတာကို ခဏခဏ ထိုင်ကြည့်ဖူး။
အဲသည်တုန်းက … ခရမ်းပြာမှာ.. ကိုနေ၀င်း ရှိတယ်။ ကိုရဲလွင် ရှိတယ်။ တခါတခါ ကိုခင်ဝမ်း ရှိတယ်။ တခါတခါ ခိုင်ထူး ရှိတယ်။ တခါတခါ မဇ္ဈိမ ကိုမောင်မောင် ရှိတယ်။ အဲဒီလူတွေကို နတ်ဘုရားလို ယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြတဲ့၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာ ပေါက်စတွေ ရှိတယ်။
အဲဒီထဲမှာ စာရေးဆရာပေါက်စ.. ကဗျာရေးသူပေါက်စ.. တစ်ဦးတည်းသော မိန်းကလေး..ကျမ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ၈၈ နောက်ပိုင်း န၀တအစိုးရက ဗကပ ယူဂျီ ဆိုပြီးတော့ ထောင်ချပစ်ခဲ့တဲ့ စာပေသမားတစုလဲ ခရမ်းပြာမှာ ရှိတတ်တယ်။ ခရမ်းပြာဟာ..စာပေ အနုပညာ နဲ့ နိုင်ငံရေး တို့ ဆုံရာ အရပ်လေးတခု။
မိုးသည်းတဲ့နေ့တွေဆို တဆိုင်လုံး လူမရှိသလို ငြိမ်တိတ်အေးချမ်း..။
တကယ်တော့ သူတို့ အားလုံးလိုလို ရှိနေကြတာ။ တခါတလေ ဘာအတီးမှ မပါဘဲ မိုးရဲရင် ဆောင်းရဲရမယ် ကို ၀ိုင်းအော်ဆိုကြသေး။ မိုးနည်းနည်းပါးချိန်.. ၀န်းကျင်တခုလုံး စိုစို စိမ်းစိမ်း အေးငြိမ်းနေတုန်းဆိုရင်တော့.. ကျမတို့ ကဗျာသမားအုပ်စုနဲ့ ခင်နေပြီဖြစ်တဲ့.. (ကျမတို့က ချိုစိမ့်လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့) ခရမ်းပြာဆိုင်ရှင် ရီရီ ဆိုတဲ့ ညီမလေးကို ကိုနေ၀င်းရဲ့ ယာဉ်အမီ ရီရီပြုံးပြန်ပါ သီချင်းတွေကို ဖွင့်ခိုင်းမြဲ။ ပြီးရင်.. စစ်ကိုင်းလမ်း.. ပြီးရင်..ခတ္တာ..။ ညနေစောင်း အိမ်ပြန်ရခါနီးလာရင်တော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ နောက်ဆုံးအိပ်မက် ကိုပဲ တညီတညွတ်တည်း နားထောင်ချင်ကြ။
ရဲရင့်..ကျောက်ခက်တို့ ဖြိုနေဆဲ.. ငါ့စိတ်တွေ နှင်နေတုန်းပေါ့..
ဆိုတဲ့ နေရာရောက်ရင် တကယ် ပြန်ဖို့ ပြင်ကြ။ လှည်းတန်းထိ လမ်းလျှောက်ကြဖို့ အရေးလဲ ပြည်လမ်းမကို မရွေးဘဲ ကန်ဘောင်ပေါ် တက်ပြီး ကျောင်းဝင်းထဲ ဖြတ်လျှောက် တဲ့ လမ်းရှည်ရှည်ဝေးဝေးကိုပဲ ရွေးကြတာပဲ။ ကျမတို့အဖွဲ့ ခရမ်းပြာထဲက ထွက်ပြီဆိုရင်
နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်.. ကျနော်သွားတော့မယ်..လမ်းရဲ့ သယ်ဆောင်ရာ .. ဟို အဝေးကို ..အဝေးကို… လွမ်းတတ်ရင်လဲ လွမ်းမှာပဲ..လွမ်းမယ်….
လို့ အော်ဆိုသွားကြမြဲ။ အဲဒီအခါ ကိုခင်ဝမ်းရှိနေရင်..သူက ပြုံးလို့။ ကန်ပေါင်ပေါ် ရောက်တော့ သီချင်း တပုဒ်ပြောင်း.. ။
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းဝင်းထဲရောက်..သီချင်း နောက်ထပ်တပုဒ်။
အင်းလျားမြေက ချစ်ရိပ်သာရယ်..အော်..အဓိပတိနဲ့ သစ်ပုတ်ပင်ရယ်..
မိုးရွာပြီးစဆို.. အဓိပတိလမ်းပေါ်မှာ စိန်ပန်းနီအကြွေတွေ မျောနေ.. ဖွေးနေတာ တွေ့တတ်မြဲ။ ဒါဆို တယောက်က စပြီ။
ကျောင်းဖွင့်ချိန် စိန်ပန်းတွေလဲ မြေမှာ ကျဲပြန့်နေ..ကံကော်ပန်းတွေနဲ့အတူ.. သူနဲ့တွေ့ရာမြေ.. တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် မြကျွန်းသာအင်းလျားကန်နယ်မြေ….
အဲ.. ဂျပ်စင်ဘက်ကို ဖဲ့ဆင်းသွားတဲ့ လမ်းသွယ်လေးဆီ ဦးတည်ပြီဆိုရင်တော့ ကျမအလှည့်ရောက်ပြီ။ ကျမက ဂျပ်စင်ကို မော့မျှော်ကြည့်တိုင်း
ဆိုတဲ့ ကိုရွှေသိမ်းမင်းရဲ့ ကဗျာကို မကြာခဏ ရွတ်မိမြဲလေ..။
အဲဒီတုန်းကတော့ ကျမတို့တတွေ လူငယ်ပီပီ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ပျော်ပျော်မွေ့မွေ့ ..။
ကျောင်းကို အင်မတန်စွဲလန်းတယ်ဆိုတဲ့ ဖေဖေကတော့ အဲလိုမဟုတ်။
ကျမကို ကျောင်းလာကြိုရင်း သူသတိရတဲ့ကဗျာတွေကို ပြောပြတော့..
ပြည်ရွာမိဘ မြင်လှဲ့ပါ့.. တို့
ဘ၀ကောင်းရာ လားစေသော်… တို့.. အဲဒါတွေပဲ သတိရတော့တယ်တဲ့။
(အဖေက ၆၂ ကျောင်းသားကိုး)
အင်းးး…တကယ်တော့ လူတိုင်းက ကိုယ်စွဲမိစွဲရာပဲ ထင်ပါရဲ့နော်။
မေနဲ့ ဆဂိ က မိုးအကြောင်း Tag တာ။
ကျမကလဲ မိုးဆိုရင်.. အမြဲ အဲဒီမြင်ကွင်းတွေ ဒီအချိန်တွေကိုပဲ သတိရ။
ဒါနဲ့ပဲ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် မိုးအမှတ်တရကို ခုလို ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(ကျမက ထပ် Tag မှာကတော့ ခင်မင်းဇော်..ယောဟန်အောင် နဲ့ ကိုမြင့်ဇေ..ပါ။
at June 23, 2007 13 comments:
မနေ့က ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်သလို ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မြန်မာ အမျိုးသမီးများနေ့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီစုမွေးနေ့ကို ၁၉၉၆ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာ အမျိုးသမီးများနေ့လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာ ခုဆိုရင် ၁၁ကြိမ်မြောက်နှစ် ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါကလဲ ကမ္ဘာသိ မြန်မာအမျိုးသမီး သူရဲကောင်း ဖြစ်တဲ့အပြင် တော်ရုံလူ မလုပ်နိုင်တဲ့ အန်တီ့ရဲ့ ဇွဲ သတ္တိ ခံနိုင်ရည် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံမှုနဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်စတဲ့ အရည်အသွေးတွေကြောင့်သာ ခုလို ဂုဏ်ပြု သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာပါပဲ။
ခုတလော ရေဒီယိုတွေ နားထောင်ရာက မြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာ ဒေါ်စုပါဖို့ မပါဖို့ ဆိုတာတွေ ကြားရတော့ ကျမရဲ့ လူပြိန်းသိလေးနဲ့ တွေးကြည့်နေမိတာတွေ ပြောပြ ချင်လာပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ အန်တီစုရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘာကြောင့် ဘယ်လောက် အရေးကြီးရသလဲဆိုတာလေးကိုပါ။
မဆလ လက်ထက်မှာ ၂၆နှစ်လုံးလုံး မျက်စေ့ပိတ် နားပိတ် လက်ပိုက် ခေါင်းညိတ် လုပ်လာခဲ့ကြရတဲ့ ကျမတို့ မြန်မာလူထုဟာ ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို တောင့်တရကောင်းမှန်း အန်တီစုကြောင့် သိလာရတာပါ။ လူထုအပေါ် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က မေတ္တာစေတနာထားတယ်ဆိုတာ ဒီလိုပါလား ဆိုတာကိုလဲ အန်တီစုကြောင့် သိလာရတာပါ။ မတရားအစိုးရရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို အချက်ကျကျ သိလာရတာလဲ အန်တီစုကြောင့်ပါပဲ။ အန်တီစုဟာ ကျမတို့ရဲ့ နားမျက်စေ့တွေကို ဖွင့်ပေးခဲ့တာပါ။ နှလုံးသားတွေ ဦးနှောက်တွေကို ပုတ်နှိုးခဲ့တာပါ။ န၀တ လက်ထက်မှာ အကြောက်တရား ဖိစီးနေတဲ့ လူထုကြီးကို လမ်းမပေါ် ထွက်ရဲလာအောင်လဲ အန်တီစုပဲ တတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
အန်တီစုဟာ ကိုယ့်မိသားစုလေးနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ အေးအေး သက်သာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နေလို့ ရပါလျှက်နဲ့ မြန်မာလူထုနဲ့အတူ ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်နဲ့ ဦးဆောင် တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျပ်အတည်းကို ကမ္ဘာက သိလာပြီး နိုင်ငံတကာက အာရုံစူးစိုက်မှု ရလာတာကလဲ အန်တီစု ကြောင့်ပါပဲ။ ဒါတွေကြောင့် ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ အန်တီစုရဲ့ ပါဝင်မှုက သိပ်ကို အရေးကြီး ပါတယ်။
တနိုင်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လူ့အခွင့််အရေးရဖို့ ဒီမိုကရေစီရဖို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကြိုးစားနေတဲ့ အန်တီစုကို ၂၀၀၃ခုနှစ် မေလ ၃၀ရက်နေ့မှာ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းကို ဖန်တီးပြီး စစ်အစိုးရက လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာကိုတောင် အန်တီက သင်ပုန်းချေခဲ့တာပါ။
အဲဒီလို အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေးကိုသာ အစဉ်တစိုက် လက်ကိုင်ထားတဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင်ကို မတရား သဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားတာဟာ စစ်အစိုးရက ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတောင်မှ အဲဒီ စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါမှဘဲ ဒီမိုကရေစီပေးမှာဆိုရင် အဲဒါကို ဒီမိုကရေစီလို့ သတ်မှတ် နိုင်ပါ့မလား…။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဒီမိုကရေစီဟာလဲ ဘယ်လိုမှ မစစ်မှန်နိုင်ပါဘူး။ အနှစ်သာရလဲ မရှိနိုင်ပါဘူး။ တရားမျှတမှုလဲ မရှိပါဘူး။ ဒါကို ကျမတို့ သေသေချာချာ ယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးဟာ ကျမတို့နိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ မျှော်လင့်ချက် ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်ပြီး သင်ပုန်းချေရေးကိုလက်ကိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချုပ်နှောင်ထားတာဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို.. ဒီမိုကရေစီကို ချုပ်နှောင်ထားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချုပ်နှောင်ထားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ လူ့အခွင့် အရေးတွေကို ချုပ်နှောင်ထားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အချုပ်အနှောင် ခံထားရတာဟာ နောက်ကွယ်မှာ အဲလို မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခံထားရသူတွေ အများကြီး ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ဖေါ်ပြနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ဒါကြောင့် အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတရားသဖြင့် အချုပ်နှောင်ခံထားရတာဟာ နိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ အပြောနဲ့ အလုပ် မညီဖြစ်နေမှုရဲ့ သက်သေပါပဲ။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာဟာ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂက တရားဝင် လက်ခံ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ကျောင်းပညာရေးထဲမှာတောင် Democracy, Peace, Human rights တွေကို ကျောင်းသားတွေ နားလည်အောင် ထည့်သင်ပေးတာပါ။ အခု ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ အဲဒီ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း ပြောရင်ကိုပဲ စစ်အစိုးရက ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူသလိုမျိုး ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်တဲ့အထိ မတရားသဖြင့် လုပ်နေတာပါ။ တကယ်တော့ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်သူတွေကိုပင်လျှင် သူ့ အခွင့်အရေးကို အဲလို လုပ်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါကိုလဲ အန်တီစုက အမြဲ ပြောနေခဲ့တာပါ။
ခုတော့ ပိုအရေးကြီးလာပါပြီ။ ကျမတို့ နိုင်ငံထဲမှာ သူတို့ လုပ်ချင်သမျှကို လက်ရဲ ဇက်ရဲပိုလုပ်နိုင်ဖို့ ဖန်တီးထား တဲ့ အခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးကို အသက်သွင်းဖို့ သူတို့ သေသေချာချာ ကြိုးစားပါတော့မယ်။ ၁၉၇၄ တုန်း ကလို အလိမ်အညာတွေ အလှည့်အဖြားတွေ မခံရအောင် ကျမတို့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ.. လူထုကို ကျမတို့ ဘယ်လို ပြောပြ အသိပေးမလဲ.. ကျမတို့ ဘယ်လောက် လုပ်နိုင်မလဲ..။ (ညောင်နှစ်ပင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဒီမှာ ဖတ်စေချင်ပါတယ်)
ကျမကတော့ အန်တီစုနောက်က တပြုံကြီး ပါလာတတ်တဲ့ လူထုကို မြင်ယောင် သတိရနေပါတယ်။ အန်တီစု ပြောလိုက်ရင် နားလည်သဘောပေါက်သွားတဲ့ မျက်လုံးတွေ ၀င်းလက်သွားပြီး လက်ခုပ် တဖြောင်းဖြောင်းတီး တတ်တဲ့ လူထုကို သတိရပါတယ်။ အန်တီစုနဲ့အတူ နိုင်ငံ့အရေးအတွက် တက်ညီလက်ညီ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်သူတွေကို မြင်ယောင်လာပါတယ်။ ကျမယုံတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သေသေချာချာ ထောက်ပြဝေဖန်ဖို့၊ လူထုကို လမ်းညွှန် ရှင်းလင်းပြဖို့၊ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြေပြေ လည်လည် ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့တွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ကို အန်တီစုကသာ အတတ်နိုင်ဆုံးပါ။ ဒါမှ စစ်အာဏာရှင်ကို အမြန်ဆုံး ဖြုတ်ချနိုင်မှာပါ။ (ဒါကို စစ်အစိုးရ ကလဲ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။) ဒါကြောင့်ပဲ လူထုအားကို ရဖို့ အတွက် အန်တီစု အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်လာဖို့ လိုပါတယ်။ အန်တီစုနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားတွေအားလုံး လွတ်မြောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါဘဲ ဒီမိုကရေစီအရေး လုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ ပြောနေသူများမှာ မရှင်းတာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါဘဲ…ဘယ်သူက လုပ်နိုင်ပါသလဲ.. ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ.. ဘယ်လောက် အာမခံ နိုင်သလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ဘယ်သူမှ သေချာ မပြောနိုင်တာပါပဲ။ ကျမကတော့ သာမန်ပြည်သူ တယောက် အနေနဲ့ တကယ် သိချင်နေပါတယ်။ ကဲ.. …ဘယ်သူ ဖြစ်နိုင်မလဲ..။
အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ။
နက်ဖြန်မှာ အန်တီ အသက် ၆၂နှစ်ပြည့်ပါပြီ။
သားတွေ မြေးတွေနဲ့ အတူနေနေရမယ့်
ဖျောက်ဖျက်ဖို့ တားဆီးဖို့ မလွယ်။
အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုးတွေလဲ ခံရ။
ဒါပေမဲ့ သူ့မေတ္တာအရိပ်တွေကတော့ အဝေမပျက်…။
ဘုရားရှင်က ကျမတို့အတွက် ပေးခဲ့တာ…
ဇွန်လ၁၉ရက် အင်္ဂါနေ့ ၁၉၄၅ခုနှစ်မှာပါ။
(ဒီပုံတူပန်းချီကို ကိုရီးယားပန်းချီဆရာမ Mrs.Khim Joung Ah က ရေးဆွဲထားတာပါ။)
ပြီးတော့ မင်းကိုမင်းလူတော်တယောက်ရယ်လို့ မမြင်ဘဲ
ခံယူထားနိုင်မယ်ဆိုရင် … ။
တလှည့်တခါတည်းနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် …။
ဆက် ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင် …။
(အဲဒီကဗျာလေးကို အန်တီစု သိပ်ကြိုက်လို့
at June 16, 2007 8 comments: